खाए पनि के,नखाए पनि के | Rato Kalam
खाए पनि के,नखाए पनि के
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खानुभएको शपथ विवादमा परेको छ । विवाद मात्र होइन,महाविवादै भने पनि हुन्छ । किनभने यो शपथविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चार वटा जति त मुद्दै दर्ता भइसकेको छ । राजनीतिक वृत्तमा विवाद,सञ्चारमाध्यममा विवाद, सामाजिक सञ्जालमा विवाद त अझ बाँकी नै छ ।
आरोप छ कि उहाँले शपथ ठीकसँग खानुभएन । सही ढंगले शपथ नखाएको कारण यो दोषभागी छ । यसरी शपथ खाएर हुँदैन । यो त शपथकै अपमान भयो ।
शपथमाथि चलेको यो बबाल देखेर म भने चकित खाइरहेको छु । प्रधानमन्त्रीले शपथ मिल्ने गरी खानोस् वा नमिल्ने गरी खानोस् त्यल्ले असरचाहिँ के गर्छ हँ ! आखिर मिल्ने गरी शपथ खाए पनि शपथ खाएअनुसार काम गर्ने त पक्कै होइन क्यारे !
योभन्दा अघि त उहाँले मिल्ने गरी नै शपथ खानुभएको थियो नि ! मिल्ने गरी शपथ खाएअनुसार मिल्ने गरी काम गर्नुभयो त ? संविधानअनुसार काम गर्छु भनेर शपथ खानुभएको थियो । मिल्ने गरी नै खानुभएको थियो ।
तर, कामचाहिँ संविधानकै उल्टो हुने गरी संसद् विघटन गरिदिनुभयो । मिल्ने गरी शपथ खाएर पनि केही नाप्यो ? जब मिल्ने गरी नै शपथ खाए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन भने अब नमिल्ने गरी शपथ खाएकोमा किन टाउको दुखाउनु ? यस्तोमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर किन भागबण्डामा भाँडभैलो गर्नु,हैन त श्रीमान !
सर्वोच्चले भन्ला – त्यो पर्दैन !
प्रधानमन्त्रीले खाएको शपथविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि अब यो ‘शपथ काण्ड’ राजनीतिक मात्र होइन कानुनी पनि भइदियो । शपथविरुद्ध मुद्दा हाल्न वकिल साबहरू कोरोनाको ख्यालै नगरी अदालत कुदिरहेका छन् ।
बाहिर त अहिले निषेधाज्ञा लागू भइरहेको छ । यसमा एम्बुलेन्स र पत्रकारलाई मात्रै छुट हुन्छ भनिएको थियो । अदालतमा मुद्दा हाल्नेहरूलाई पनि छुट छ र ? छ भने यसलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्यो ।
त्यसो त मुद्दा हालिएकै रहेछ भने पनि घबराउनु पर्ने कुनै कारण छैन । किनभने मुद्दा हालिएको त सर्वोच्च अदालतमा हो नि । त्यो पनि ओलीविरुद्ध । अब ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि त्यहाँबाट कस्तो फैसला आउला त्यो भनिरहनु पर्ला र ?
मुद्दा हाल्नेहरूको जिकिर छ– यो शपथ खारेजै गर्नुपर्छ ! ओलीलाई पुनः शपथग्रहण गराउनुपर्छ ! प्रमले गरेका जम्मै काम अवैध घोषणा गर्नुपर्छ ! अर्को काम गर्नै दिनुहुन्न ! माफी मगाउन लगाउनुपर्छ !
जिकिरहरू त धेरै होलान् । तर जस्तोसुकै जिकिर भए पनि अन्ततः सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ – त्यो पर्दैन !-सुरेश मानन्धर जन आस्थाबाट साभार
नेकपा माओबादी केन्द्र सम्बद्ध विदेश बिभाग मलेसियाले दुई लाख बढी रकम पठायो।
कोरोना महामारीको मौका छोपी एनआईसी एशिया बैंक र प्राइम बैंकद्वारा कृत्रिम रिकभरी, नक्कली कर्जा बिस्तार, लाखौं लगानीकर्ताहरु जोखिममा : राष्ट्र बैंक मुखदर्शक